Iyo Nhamba 2 Inorevei PamweyaNgengirozi Nhamba - Kunamata
ndingaona sei ndichifamba ndakafa pafoni yangu
maitiro ekugadzirisa yako ipad kana ikasadaro batidza
maikorofoni yakamira kushanda pa iphone 6
sei yangu ipad ichiraji
Chii Chinoreva Iyo Nhamba 2 Inoreva NeMweya Ngirozi Nhamba
Inorevei nhamba 2 inoreva ngirozi pamweya
Zvinoreva zveMweya zveNhamba 2 .Kana nhamba 2 ichiwanzoonekwa pamberi pako, haufanire kuifuratira. Chingave chiratidzo chekuti ngirozi yako yekuchengetedza iri kuyedza kukutumira iwe meseji.
Kuti unzwisise meseji yengirozi yako inokutarisira, unofanirwa kuziva zvinoreva nhamba iyo yakatumirwa kwauri. Nhamba yega yega ine chirevo chayo chekufananidzira uye inonzi nhamba yemutumwa.
Muchikamu chino, isu tichataura nezve Mutumwa Nhamba 2 uye zvarinoreva zvakavanzika. Isu tinokuudza izvo ngirozi nhamba 2 inomiririra uye chii chinonakidza nezve iyi nhamba. Kana iwe uchigara uchiona iyo nhamba 2 chero padhuze newe, iwe unofanirwa kuverenga chinyorwa ichi sezvo zvichizokubatsira iwe kuti unzwisise izvo wako mutariri ngirozi iri kuedza kukuudza iwe.
Mutumwa nhamba 2 - Zvinorevei izvozvo?
Kana iyo nhamba 2 ikaonekwa yakakukomberedza, inogona kunge iri nhamba yako yengirozi. Ngirozi nhamba yechipiri inowanzoenderana nekuenderana, kuenzanisa, uye kubatana.
Icho zvakare chiratidzo chekuchinjika uye kufunga, zvitendero, uye hukama. Mutumwa Nhamba 2 anokuudza kuti inguva yekutsvaga runyararo rwako nekubatana. Iwe unofanirwa kupa uye kugamuchira rudo nekuti ndicho chikuru chipo muhupenyu hwedu. Pazasi iwe unodzidza zvakawanda nezve zvakavanzika zvinoreva uye chiratidzo cheMutumwa Nhamba 2.
Ngirozi nhamba 2 ine zvakawanda zvakavanzika zvinoreva. Chinhu chakakosha ndechekuti wako mutariri ngirozi iri kuyedza kutaura newe nezvenhamba iyi. Ngirozi yako yekuchengetedza iri kuyedza kukupa hushingi uye kutenda. Iwe unofanirwa kuziva kuti zvese muhupenyu hwako zvichave zvakanaka nekuti ngirozi yako inokuchengetedza ichakuchengetedza. Iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu uye kutenda mune ngirozi. Iwe une chinangwa chako muhupenyu munyika ino, uye ngirozi yako inokuchengetedza ichakuratidza nzira yakanakisa yekutevera. Iwe unongofanirwa kuve nekutenda uye kuvimba nengirozi yako.
Ngirozi nhamba 2 inofananidzirawo kubatana pamwe nekubatana. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve unowirirana uye wezvematongerwo enyika. Iwe unofanirwa kushanda nevamwe vanhu nekuti izvo zvinogona kukuunzira iwe budiriro huru. Izvo zvakare zvichave zvakakosha kuti ushande nesimba nekuti iwe unoziva kuti iwe uchapihwa mubairo nazvo.
Icho chiratidzo cheMutumwa Nhamba 2 chine zvakare chimwe chinhu chine chekuita nechiyero. Paunoona iyo nhamba, inguva yekuenzanisa hupenyu hwako. Ndiyo chete nzira yaunogona kufambira mberi uye kuzadzisa zvinangwa zvako.
Kune chimwe chirevo chakavanzika cheMutumwa Nhamba 2. Zvinogona kureva kuti urikuyedza kuenda kumberi uye kuti wafunga kutanga chikamu chitsva muhupenyu hwako. Zuva rega rega iwe uri padyo nezvinangwa zvehupenyu hwako uye ziva kuti mutumwa wako ngirozi ichakubatsira iwe. Iwe unoziva kuti iwe unofanirwa kushanda nesimba uye kuve unobudirira zvakanyanya sezvaunogona.
Iwe unofanirwa zvakare kufunga zvakanyanya nezve hupenyu hwako hwepamweya. Inguva yekunzwisisa kuti ngirozi yako inokudzivirira inokudzivirira uye inokutevera munzira yaMwari.
Ngirozi nhamba 2 inogona zvakare kuve nehukama nerudo rwako uye hukama. Paunoona nhamba 2, ngirozi yako inokuchengeta inokuudza kuti kune zvakawanda zvekuvimba uye kuvimba muhukama hwako. Hukama hwako hwakanaka, uye iwe unofanirwa kunakirwa nezvose zvipo izvo zveMweya masimba zvawakatumira kwauri.
Kune rimwe divi, nhamba 2 inogona zvakare kureva kuti hapana chivimbo chakakwana muhukama hwako. Ngirozi yako yekuchengetedza iri kuyedza kukuudza kuti iwe unofanirwa kuwedzera hukama hwako zvakanyanya.
Mutumwa nhamba 2 anogona zvakare kuoneka iyo nguva iwe yaunenge uine matambudziko muhukama hwako. Nenzira iyi, ngirozi yako inokuchengetedza iri kuyedza kukuudza kuti zvese zvinetswa nematambudziko zvinogona kugadziriswa, saka haufanire kunetseka. Iwe unofanirwa kuve wakadzikama uye wezvematongerwo enyika, nekuti ipapo chete ndipo paunogona kuwana mhinduro yakanakisa yedambudziko rega rega. Iwe haufanire kutya nekuti wako mutariri ngirozi inewe.
Ngirozi Nhamba 2 inomiririra meseji yakasimba kwauri inoenderana nehupenyu hwako hwerudo. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti haufanire kurasa tariro. Iwe unofanirwa kuziva kuti rudo ndicho chinhu chakanakisa kwazvo pasirese. Zvinogona kunge zvisiri nyore dzimwe nguva, asi iwe unofanirwa kutenda kuti zvinhu zvese zvinechirongwa chako.
Iwe unofanirwa kuve wakagwinya uye uine hushingi hwekuzvisarudzira wega. Usatombo kunetseka nekuti ngirozi yako inokutarisira inewe. Saka paunoona nhamba 2, unogona kuzorora nekuti iwe unoziva kuti hausi wega.
Ivo vanofanirwa kupa rudo kune vamwe uye zvakare kugamuchira rudo kubva kwavari. Iwe unofanirwa kuziva kuti iwe uri wakanaka mwari chisikwa uye kuti iwe unofanirwa kuremekedzwa. Iwe unofanirwa kukomberedzwa nesimba rakanaka uye nevanhu vanogona kukukurudzira uye kukuita iwe munhu ari nani. Usakanganwa kuti rudo ndicho chinhu chakanakisa muhupenyu.
Kana iwe waona izvo zvakavanzika zvinoreva uye chiratidzo cheMutumwa Nhamba 2, isu tinokuudza iwe zvinonakidza chokwadi nezveiyi nhamba.
Chokwadi chinonakidza nezve nhamba 2
Pane zvinhu zvakawanda zvinofadza pamusoro peNhamba 2 zvekuti unogona kunyatsonzwisisa zvinomiririra nhamba iyi yengirozi. Nhamba yechipiri ndiyo yekutanga nhamba, saka inowanzoonekwa seinoshamisira nhamba yekutanga. Iyi nhamba zvakare iri nhamba yeatomu yehelium.
Sezvaungave iwe uchiziva, nhamba 2 chiratidzo chekudyidzana uye chiyero, asi dzimwe nguva inogona zvakare kuve chiratidzo chekupikisa kana kukakavara.
Zvinoenderana neBhaibheri, nhamba 2 ndiyo nhamba yaEvha. MuFar East, nhamba yechipiri inoonekwa sekurohwa kwemhanza. Kune chirevo chakakurumbira mutsika dzechiChinese chinoti zvinhu zvese zvakanaka zvinoitika vaviri vaviri.
Munyori ane mukurumbira wenyaya dzevana, Hans Christian Andersen, akazvarwa musi wa2 Kubvumbi. Zuva iri nekudaro rinopembererwa sezuva reInternational Children's Book Day.
Chii chekuita kana iwe ukaona iyo nhamba 2?
Kana nhamba 2 iri yako ngirozi nhamba, iwe uchaiona kwese. Paunoona iyo nhamba, iwe unofanirwa kuziva kuti inogona kunge iine hukama nemanzwiro ako uye pfungwa panguva iyoyo.
Semuenzaniso, kana uine zvakawanda zvinonetsa kubasa, Mutumwa Nhamba 2 achakubatsira iwe kuva wediplomatic, nekuti iyi ndiyo nzira yakanakisa yekukunda matambudziko ese. Iwe unofanirwa kudzikama uye kwete kukurirwa nemanzwiro ako.
Kana iwe ukaona Mutumwa Nhamba 2 kazhinji, zvinoreva kuti iwe wagadzirira kukanganisa uye unogara uchisarudza kugara munzira yerunyararo. Ivo havadi kukakavara kana kupokana nevamwe nekuti vanofunga kuti chero dambudziko rinogona kugadziriswa murunyararo.
Kuona nhamba 2 zvinoreva zvakare kuti ngirozi dzako dzinokuchengetedza dzinoziva kuti wakashanda zvakadii uye kuti dzinoda kukurudzira iwe zvakanyanya. Ngirozi dzako dzinoda kuti urambe uchishanda, nekuti ipapo chete ndipo paunogona kuzadzisa zvinangwa zvako wega. Asi yako ngirozi inokutarisira yakavimbisa iwe kuti iwe uchapihwa mubairo webasa rako.
Kana iwe ukaona mutumwa nhamba 2, iwe unofanirwa kuziva kuti wako mutariri ngirozi inewe, uye iye anoedza kukukurudzira iwe kutevedzera zviroto zvako. Iwe unofanirwa kutenda mukati mako uye yako mutariri ngirozi, saka hapana chikonzero chekufunganya kana kutya chero chinhu. Ngirozi yako yekuchengetedza ichakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako, saka tungamirwa nengirozi yako munzira yako yehupenyu.
Nhamba yechipiri, iyo inowanzo kuoneka yakakukomberedza, inokuudza kuti iwe pakupedzisira uchawana kuchengetedzeka uye kugadzikana muhupenyu hwako. Iwe uri munhu akasimba uye akatsunga munhu uye une rutsigiro kune wako mutariri ngirozi. Hapana chinhu chingaite kuti iwe urege zvinangwa zvako.
Zvinorevei 711 Zvinoreva zveMweya - Ngirozi Nhamba
ZVII ZVINOREVA KUTI 808 ZVINOREVA PAMWEYA - NOMWE NGIROZI
ZVII ZVINOREVA 47 KUTI VANAMWE NOMUDZIMU - NGirozi
ZVII ZVINOREVA 4 KUTI ZVINONAMATA NOMUDZIMU - HUMWE NGirozi